Ady amin’ny torohay diso any amin’ireo fiteny tsy tsara tohana; lesona avy amin’ny lafivalon’ny tany · Global Voices teny Malagasy
Fomba fijery avy any Etiopia, India ary Borkina Faso
MpanoratraFirst Draft News
Voadika ny 04 Janoary 2020 5:18 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, srpski, Español, Português, English, Ελληνικά, Esperanto , Română , عربي, বাংলা, English
Sary fanaingoana an'ny First Draft News, nahazoana alàlana.
Fanamarihan'ny tonia : tao amin'ny tranonkalan'ny First Draft ity lahatsoratra nosoratan'i Ali Abbas Ahmadi ity no nivoaka voalohany. Ary naverina navoaka ho ampahany amin'ny fifanomezan-tànana amin'ny kaonferansa “webinar” tamin'ny 10 Desambra.
[Raha tsy asiana fanamarihana, mitondra mankany amina pejy miteny anglisy daholo ny rohy.]
Mamaritra betsaka ny fahafahantsika mahazo vaovao azo antoka ny fiteny izay ifampiresahantsika, ary koa ny fahafahantsika mahazo ireo fanamarinana izay mandiso ireo ampaham-pahamarinana na ireo fanamafisana diso. Tsy ela akory izay, nisy kaonferansa webinar nokarakarain'ny First Draft sy ny Global Voices, nifantoka tamin'ny fomba ahafahan'ireo mpifandray amin'ny fiteny vitsy an'isa mandingana io tsy fitoviana amin'ny resaka torohay io.
Nampianarin'ny taona 2020 antsika fa saika ny vondrompiarahamonina rehetra mihitsy no miady amin'ny vokadratsin'ny fanelezana torohay diso. Na manana ny fahafahana mizaha ny zavamisy sy ny torohay amin'ny fitenindreniny aza ireo mampiasa fiteny ampiasain'ny maro an'isa, tsy toy izany hatrany kosa ho an'ireo vondrompiarahamonina hafa. Matetika no zara raha manome fahafahana an'ireo fiteny vitsy an'isa ireo sehatra sy fikambanana mpanao fanamarinana, ka mahatonga fahasahiranana bebe kokoa amin'ny ady atao amin'ny torohay diso, sy ny fanamafisana ny fahaizana ny haino-vaky-jery any anatin'ireo vondrompiarahamonina.
Tafiditra ao anatin'ny fandraisana andraikitra Rising Voices ataony, niresaka tamin'ireo manampahaizana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao i Eddie Avila avy amin'ny Global Voices [fr] sy Marie Bohner avy amin'ny First Draft mba hijerena ny fomba iatrehan'ireo vondrompiarahamonina eny ifotony ny loza mitatao entin'ny fanelezana torohay diso amin'ny fitenindrenin-dry zareo. Isan'ireny ry Rahul Namboori avy amin'ny Fact Crescendo (Inde), Endalkachew Chala, avy amin'ny Anjerimanontolo Hamline (Etazonia) sy Kpenahi Traoré avy amin'ny RFI (Burkina Faso), izay nizara ny fomba fijerin-dry zareo momba izay hatao hiatrehana io fanamby tokana io.
Ankaotra ny anglisy dia misy 22 ireo fiteny ofisialy [fr] ao India, ary raha kely indrindra dia 500 ireo fiteny tsy ofisialy, izay vao mainka mampananosarotra manokana ny asan'ireo olona napetraka hisahana ny fanamarinana ny zavamisy, ireo mpanao gazety sy mpampianatra izay tsy maintsy miantoka hoe afaka mahazo ireo torohay azo antoka ny olona rehetra. Ny fanelezana torohay diso dia nisy fiantraikany namoa-doza manokana tao amin'ny firenena, satria ireo honohono dia niteraka fanafihana sy sakoroka natao hamelezana ireo vitsy an'isa ara-poko sy ara-pinoana, nahafatesana olona am-polony maro tato anatin'ny taona vitsy farany.
Ao anatin'io toejavatra io, hoy Ing Namboori, no iadian'ny Fact Crescendo amin'ny fanelezana vaovao diso. Miaraka amin'ny fanampian'ireo tarika avy ao an-toerana, ankoatra ny fiteny anglisy sy hindoa, dia amin'ny fiteny sivy ao an-toerana no anamarinan'io fikambanana io ny vaovao, mba hahitàna izay honohono sy hisorohana ny fielezan'izy ireny. Hita ao anatin'ny tariky ny Fact Crescendo any amin'ny faritra ireo mpanao gazety eo an-toerana, lahy sy vavy, ary mahafantatra ny tontolo ara-kolontsaina sy pôlitika tokana any amin'ny toerana iasan-dry zareo. Noho ireo fitaovana toy ny CrowdTangle an'ny Facebook, an-jatony ireo vondrona sy kaonty ety anaty tambajotra sôsialy eo ambany fanarahamason'ilay tarika entiny hanarahana maso ireo vaovao diso sy mamitaka. Ampiasain'ny Fact Crescendo ihany koa ny antso sy vondrona WhatsApp mba hahafahan'ireo mpanadihady ao aminy mifandray mivantana amin'ireo vondrompiarahamonina ifotony sy manome azy ireo amin'ny fiteniny ireo vaovao voamarina.
Tsy resaka fotsiny hoe momba ny fivezivezen'ireo vaovao diso amin'ireo fiteny tena miasa ao India, toy ny anglisy sy ny hindi, fa koa ny fomba nahatongavan'ireny vaovao sy torohay diso ireny avy any ivelany nankao amin'ny firenena. Nandalo tamin'ny fiteny espaniôla sy italiàna ireo fanambaràna feno fitaka momba ny coronavirus avy any Italia sy Espaina vao tonga tamin'ny fiteny anglisy sy hindi, talohan'ny nivoahan'izy ireny tamin'ny fitenim-paritra, hoy Ing. Namboori. Nasiana fatra kely amin'ny toejavatra nampifanarahana amin'ireo olona kendrena ny andalana tsirairay, izay mahatonga ny vaovao diso ho lasa tena azo inoana kokoa sy ahafahany misy fiantrakany any amin'ireo vondrompiarahamonina manana fiteny tsy mahazo na zara raha mahazo torohay azo antoka.
Manana fahasamihafàna mitovitovy amin'izany i Etiopia raha fiteny no resahana, manana fiteny telo fototra ary 86 hafa ifandraisana ny ao amin'io firenena ao Afrika Atsinanana io. « Tsy ampy fitaovana ny ankamaroan'ireny fiteny ireny, ary tsy vaomarina amin'ireny fiteny ireny ny zavamisy », hoy i Endalkachew Chala, avy ao Etiopia. Na ampiasaina be ety anaty tambajotra sôsialy aza ny maro amin'izy ireny, tsy mora amin'ireo mpampiasa azy ireny ny mahazo torohay voamarina sy azo antoka.
Tsy ela akory izay, vao mainka nanaratsy ny olan'ireo fiteny tsy dia mahazo fanohanana sy tsy ampy fitaovana ireo ny fahatapatapahan'ny fidirana aterineto tany amin'ny faritra avaratr'i Tigré noho ny fisian'ny fifandonana ao amin'ny firenena. Niteraka fiforonana tontolo roa ho an'ny torohay izany izay tsy nahafantaran'ireo olona monina any amin'ny faritr'i Tigré ny zavatra mitranga manerantany, hoy ny nambaran'Ing. Chala. Ny vaovao sy torohay zarain'ireo mpilaza vaovao ao an-toerana ihany no azon'ireo mponina, izay mitondra mankany amin'ny « fisafotofotoana» amin'ny fahatakarana ny toedraharaha noho ireo olona miaina any Tigré manana fomba fijery tsy mitovy amin'ny an'ireo miaina any ivelany, hoy Ing. Chala nanampy.
Hitan'Ing. Chala ihany koa ny fisian'ny fianahan'ireo vaovao diso mifandraika amin'ny fahasalamàna manerana an'i Etiopia. Nanjaka nanerana an'i Etiopia ireo vaovao / torohay diso momba ny valanaretina COVID-19, tamin'ny fiteny marobe, izay sady niely teny anivon'ireo vondrompiarahamonina ara-piteny no lasa lavitra mihitsy koa aza. Ny tsy fisian'ireo fikambanana mpanamarina zavamisy na ny tsy fahafahana mahazo torohay azo antoka any anivon'ireo fiteny tsy tsara tohana ara-bola dia mamela ny honohono hiely any anatin'ireo vondrompiarahamonina madinika any ambanivolo sy ireo fiteny vitsy an'isa.
Manerana ny firenena, misy ireo olona vonona hanao fanamarinana ny zavamisy, hoy ny nambaran'i Chala, saingy mandrakariva dia mandeha any amin'ireo izay manana fifamatorana ara-pôlitika ny famatsiambola avy any ivelany, na ireo izay miteny ny fiteny mibahan-toerana any amin'ireo tanandehibe. Nampiany hoe tokony hokaramain'ireo sehatra na orinasa vahiny ireo mpiteny mahay ny fiteny vitsy an'isa mba handray anjara amin'ny fanamarinana ny vaovao ho an'ireny vondrompiarahamonina ireny ka tsy hiankinan-dry zareo amin'ireo olona tsy teraka tao anatin'ireny fiteny ireny.
Any amin'ny faritra sasany ao Afrika, miatrika ny olan'ny tsy fisian'ny famatsiambola ihany koa ireo mpiteny ny fiteny Bambara, tenin'ireo vitsy an'isa ao andrefan'ny kaontinanta. Na mahazo vaovao amin'ny alàlan'ny mpampahalàla vaovao amin'ny fahitalavitra sy ny fampielezampeo ao an-toerana aza ireo olona mpiteny bambara, ary afaka misoroka ireo onjana vaovao diso ety anaty tambajotra, dia miankina tanteraka ihany koa amin'ireo fampahalalambaovao tranainy, hoy i Kpenahi Traoré. Goavana be araka izany ny andraikitr'ireny mpampahalala vaovao miainga amin'ny zavamisy ireny, satria matetika, tsy afaka miditra aterineto ireo vondrompiarahamonina bambara mba ho entiny manamarina izay zavatra ren-dry zareo. Na tsy ananan'ireo fikambanana ao an-toerana aza amin'izao fotoana izao ny fahafahana manana ireo fitaovana ilaina mba hanelezana vaovao miainga amin'ny zavamisy ho any amin'ny vondrompiarahamonina misy azy ireo, misy ireo fikambanana vahiny toy ny RFI Mandenkan manamarina ny vaovao amin'ny fiteny bambara ary amin'ireo fiteny hafa ao an-toerana, hoy i Rtoa Traoré.
Any Amazonia, izay am-bava no tena ifandraisan'ireo vondropiarahamonina, dia tena iankinan-javatra maro tokoa ny hoe tokony «hifanaraka amin'ny zavamisy eo an-toerana» ireo fitaovana — indrindra fa ireo manodidina ny coronavirus hoy Ing. Avila tamin'ny Global Voices. « Mety tsy hitovy isaky ny kolontsaina ireo olona afaka ametrahana fitokisana na ireo zavatra toa azo inoana, izany no maha-zavadehibe ny fiheverana ireo karazan-javatra jerentsika ety anaty aterineto. »
Raha toa ireo olona sy fikambanana sasany miezaka ny hanome vaovao mifanarana amin'ny zavamisy ho an'ireo mpiteny ny fiteny zara raha mahazo tohana, dia somary mbola anjorom-bàla ihany ireo vahoaka mpampiasa fiteny vitsy an'isa raha oharina amin'ireo izay mampiasa ny fiteny mibahan-toerana. Na ohatra aza ka tafiditra amin'ny fanatontoloana ety anaty aterineto izao tontolo izao, tavela any afara kosa ireo olona zara raha afaka mifandray amin'ny aterineto na manana fomba fifandraisana hafa. Azon'ireo media sy sehatra atao ny mampiasa vola any amin'ireny vondrompirahamonina ifotony ireny mba hampivoatra ny fanabeazana momba ny fahaizana ny haino-vaky-jery, mba hahafahan'izy ireny miditra, toy ny fahafahan'ny hafa, mahazo vaovao / torohay voamarina amin'ny fitenin-dry zareo.
Kanefa, soritan'ireny ohatra manerantany ireny ihany koa ny filàna miresaka ireo olana midadasika kokoa, toy ny tahan'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra na ny fahafahana mampiasa aterineto rehefa handrafitra vahaolana natao hiadiana amin'ny fanelezana vaovao diso any amin'ireo fiteny vitsy an'isa. Mba hametrahana fotodrafitrasa ilaina amin'ny fanatsaràna ny fahaizana ny haino-vaky-jery dia tena zavadehibe ny mahatakatra ny fomba fifandraisan'ireny vondrompiarahamonina ara-piteny ireny.